Yepamusoro-Yemhando Nesi kit ye ​​dialysis fekitori uye vagadziri | Sanxin
Ichi chigadzirwa chinoshandiswa pakurapa maitiro ehemodialysis kurapwa. inonyanya kugadzirwa nepurasitiki tireyi, isina-yakarukwa isina kuchena tauro, ayodhini donje swab, bhendi-rubatsiro, inopinza tampon yekushandisa kwekurapa, rabha girovhosi yekushandisa kwekurapa, yekunamatira tepi yekushandisa kwekurapa, machira, mubhedha chigamba muhomwe, isina kuchena gauze uye doro swabs.
Kuderedza mutoro wevashandi vekurapa uye nekuvandudza mashandiro ebasa revashandi vekurapa.
Yakasarudzwa yemhando yepamusoro zvishongedzo, akawanda mamodheru sarudzo uye inoshanduka kumisikidza zvinoenderana nemakiriniki ekushandisa maitiro.
Models uye zvakatemwa: Type A (basic), Type B (yakatsaurirwa), Type C (yakatsaurirwa), Type D (multi-function), Type E (catheter kit)
◆ Ultra-yakatetepa yakapetwa yakapetwa kaviri tsono inoderedza marwadzo uye kukuvara kwetishu.
Device Exclusive yekudzivirira chivharo chengetedzo chidziviriro kudzivirira iatrogenic kukuvara kune hukuru hukuru.
Hole Iyo oval kumashure gomba uye rinotenderera mapapiro dhizaini inogona kunyatsobatsira kugadzirisa kweropa kuyerera uye kumanikidza, izvo zvinobatsira kugadzirisa kona yetsono uye kuona mhando ye dialysis.
Pashure: Central venous catheter pack (ye dialysis)
Zvadaro: Y mhando IV catheter
Hemodialysis powder (yakabatana nemushini)